21.07.20 Morning Nepali Murli Om Shanti BapDada Madhuban
“ मीठे बच्चे– बाबाले तिमीलाई पढाइरहनु भएको छ सुन्दर देवी-देवता बनाउन , सुन्दरताको आधार हो पवित्रता।”
रूहानी ज्योतिमा जुन पुतलीहरू स्वाहा हुन्छन्, उनीहरूको निशानी के हुन्छ?
स्वाहा हुने पुतलीहरू (१) बाबा जो हुनुहुन्छ, जस्तो हुनुहुन्छ उहाँलाई यथार्थ रूपमा चिनेर याद गर्छन्, (२) स्वाहा हुनु अर्थात् बाबा समान बन्नु, (३) स्वाहा हुनु अर्थात् उच्च राजाईको अधिकारी बन्नु।
मीठे-मीठे रूहानी बच्चाहरूले यो गीतको लाइन सुन्यौ। यो कसले सम्झाउनु हुन्छ? रूहानी बाबाले। उहाँ शमा पनि हुनुहुन्छ। नाम धेरै किसिमका राखेका छन्। बाबाको स्तुति पनि धेरै गर्छन्। यो पनि परमपिता परमात्माको स्तुति हो नि। बाबा शमा बनेर आउनु भएको छ पुतलीहरूको लागि। पुतलीहरूले जब शमालाई देख्छन् अनि त्यसमा होमिएर शरीर छोडिदिन्छन्। अनेक पुतलीहरू हुन्छन् जसले शमामा प्राण दिन्छन्। त्यसमा पनि खास जब दीपमाला हुन्छ, बत्तीहरू धेरै जल्छन् अनि धेरै साना-साना जीव रातमा मर्छन्। अब तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ– हाम्रो बाबा हुनुहुन्छ सुप्रीम रुह। उहाँलाई हुसेन पनि भनिन्छ, धेरै सुन्दर हुनुहुन्छ किनकि उहाँ एवर प्योर हुनुहुन्छ। आत्मा पवित्र बनेपछि उसलाई शरीर पनि पवित्र, नेचुरल सुन्दर मिल्छ। शान्तिधाममा आत्माहरू पवित्र रहन्छन् फेरि जब यहाँ आउँछन् पार्ट खेल्न अनि सतोप्रधानबाट सतो, रजो, तमोमा आउँछन्। फेरि सुन्दरबाट श्याम अर्थात् कालो पतित बन्न पुग्छ। आत्मा जब पवित्र हुन्छ तब गोल्डेन एजेड भनिन्छ। उसलाई फेरि शरीर पनि सतोप्रधान मिल्छ। दुनियाँ पनि पुरानो र नयाँ हुन्छ। उहाँ परमपिता परमात्मा नै सुन्दर हुनुहुन्छ, जसलाई भक्तिमार्गमा बोलाइरहन्छन्– हे शिवबाबा, उहाँ निराकार परमपिता परमात्मा आउनु भएको छ। आत्माहरूलाई अपवित्रबाट पवित्र सुन्दर बनाउन। यस्तो होइन, आजकल जो धेरै सुन्दर छन्, उनको आत्मा पवित्र हुन्छ। होइन। हुन त शरीर सुन्दर हुन्छ फेरि पनि आत्मा त पतित हो नि। बेलायतमा कति सुन्दर बन्छन्। जानेका छौ– यी लक्ष्मी-नारायण हुन् सत्ययुगी सुन्दर र यहाँ छन् नर्कका सुन्दर। मनुष्यले यी कुरालाई जानेका छैनन्। बच्चाहरूलाई नै सम्झाइन्छ यो हो नर्कको सुन्दरता। हामी अहिले स्वर्गका लागि नेचुरल सुन्दर बनिरहेका छौं। २१ जन्मको लागि यस्तो सुन्दर बन्छौं। यहाँको सुन्दरता त एक जन्मको लागि हो। यहाँ बाबा आउनु भएको छ, सारा दुनियाँका मनुष्य मात्र त के दुनियाँलाई पनि सुन्दर बनाउनु हुन्छ। सत्ययुग नयाँ दुनियाँमा थिए नै सुन्दर देवी-देवताहरू। त्यस्तै बन्नको लागि अहिले तिमीले पढ्छौ। बाबालाई शमा पनि भन्छन् तर हुनुहुन्छ परम आत्मा। जस्तै तिमीलाई आत्मा भन्छन् त्यसैगरी उहाँलाई परम आत्मा भनिन्छ। तिमी बच्चाहरूले बाबाको महिमा गाउँछौ, बाबाले फेरि बच्चाहरूको महिमा गर्नुहुन्छ, तिमीलाई यस्तो बनाउँछु, मेरो भन्दा पनि तिम्रो पद उच्च हुन्छ। म जो हुँ, जस्तो हुँ, जस्तो मैले पार्ट खेल्छु यो अरू कसैले जानेका छैनन्। अहिले तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ– कसरी हामी आत्माहरू पार्ट खेल्नको लागि परमधामबाट आउँछौं। हामी शूद्र कुलमा थियौं फेरि अब ब्राह्मण कुलमा आएका छौं। यो पनि तिम्रो वर्ण हो अरू कुनै धर्मावलम्बीको लागि यो वर्ण होइन। उनीहरूको वर्ण हुँदैन। उनीहरूको त एउटै वर्ण हुन्छ, क्रिश्चियन नै चल्दै आउँछ। हो, उनीहरू पनि सतो-रजो-तमोमा आउँछन्। बाँकी यो वर्ण तिम्रो लागि हो। सृष्टि पनि सतो-रजो-तमोमा आउँछ। यो सृष्टि-चक्र बेहदका बाबा बसेर सम्झाउनु हुन्छ। जो बाबा ज्ञानका सागर, पवित्रताका सागर हुनुहुन्छ, उहाँले स्वयं भन्नुहुन्छ– मैले पुनर्जन्म लिन्नँ। हुन त शिव जयन्ती पनि मनाउँछन् तर मानिसहरूलाई यो थाहा छैन– कहिले आउनु हुन्छ? उहाँको जीवन कहानीलाई पनि जानेका छैनन्। बाबा भन्नुहुन्छ– म जो हुँ, जस्तो हुँ, ममा के पार्ट छ, सृष्टि-चक्र कसरी घुम्छ– यो तिमी बच्चाहरूलाई मैले कल्प-कल्प सम्झाउँछु। तिमीले जानेका छौ– हामी सिँढी उत्रिदै-उत्रिदै तमोप्रधान बनेका छौं। ८४ जन्म पनि तिमीले लिन्छौ। अन्त्यमा जो आउँछन् उनलाई पनि सतो-रजो-तमोमा आउनु नै छ। तिमी तमोप्रधान बनेपछि सारा दुनियाँ तमोप्रधान बन्छ। फेरि तिमीलाई तमोप्रधानबाट सतोप्रधान अवश्य बन्नु छ। यो सृष्टि-चक्र घुमिरहन्छ। अहिले हो कलियुग त्यसपछि फेरि सत्ययुग आउँछ। अब कलियुगको अवधी पूरा भयो। बाबा भन्नुहुन्छ– मैले साधारण तनमा हुबहु कल्प पहिला जसरी नै प्रवेश गरेको छु फेरि तिमी बच्चाहरूलाई राजयोग सिकाउन। योग त आजकल धेरै छन्। बेरिस्टरी योग, इन्जिनियरिङ् योग....। कानुन पढ्नको लागि वकिलको साथ बुद्धिको योग लगाउनु पर्छ। सम्झन्छन्– हामी वकिल बनिरहेका छौं त्यसैले पढाउनेलाई याद गर्छन्। उनका त आफ्ना पिता अलग हुन्छन्, गुरु पनि छन् भने उनलाई पनि याद गर्छन्। तापनि वकिलको साथ बुद्धिको योग हुन्छ। आत्माले नै पढ्छ। आत्मा नै शरीरद्वारा न्यायाधीश वकिल आदि बन्छ।
अहिले तिमी बच्चाहरूले आफूमा आत्म-अभिमानी बन्ने संस्कार बनाउँछौ। आधाकल्प देह-अभिमानी रह्यौ। अब बाबा भन्नुहुन्छ– देही-अभिमानी बन। आत्मामा नै पढाइको संस्कार हुन्छ। मनुष्य आत्मा नै न्यायाधीश बन्छ, अहिले हामी विश्वको मालिक देवता बनिरहेका छौं, पढाउनेवाला हुनुहुन्छ शिवबाबा, परम आत्मा। उहाँ नै ज्ञानका सागर, शान्ति, सम्पत्तिका सागर हुनुहुन्छ। यो पनि देखाउँछन्– सागरबाट रत्नहरूको थाली निस्किन्छ। यो हो भक्तिमार्गको कुरा। बाबालाई रेफर गर्नु पर्ने हुन्छ। बाबा सम्झाउनु हुन्छ– यो हो अविनाशी ज्ञान रत्न। यी ज्ञान रत्नहरूबाट तिमी धेरै धनवान बन्छौ र फेरि हीरा-जुहारत पनि तिमीलाई धेरै मिल्छन्। यी एक-एक रत्न लाखौं रूपैयाँका छन्, जसले तिमीलाई यति धनवान बनाउँछ। तिमीले जानेका छौ– भारतखण्ड नै पावन दुनियाँ थियो। यसमा पवित्र देवताहरू रहन्थे। अहिले काला अपवित्र बनेका छन्। आत्माहरू र परमात्माको मेला हुन्छ। आत्मा शरीरमा छ तब नै सुन्न सक्छ। परमात्मा पनि शरीरमा आउनु हुन्छ। आत्माहरू र परमात्माको घर शान्तिधाम हो। त्यहाँ हलचल केही पनि हुँदैन। यहाँ परमात्मा बाबा आएर बच्चाहरूसँग मिल्नुहुन्छ। शरीर सहित मिल्नुहुन्छ। त्यो त घर हो, त्यहाँ विश्राम पाइन्छ। अहिले तिमी बच्चाहरू पुरुषोत्तम संगम युगमा छौ। बाँकी दुनियाँ कलियुगमा छन्। बाबा बसेर सम्झाउनु हुन्छ– भक्तिमार्गमा खर्च धेरै गर्छन्, चित्र पनि धेरै बनाउँछन्। ठूला-ठूला मन्दिर बनाउँछन्। नत्र कृष्णको चित्र घरमा पनि त राख्न सक्छन्। धेरै सस्ता चित्र मिल्छन् फेरि यति टाढा-टाढा मन्दिरहरूमा किन जान्छन्? यो हो भक्तिमार्ग। सत्ययुगमा यी मन्दिर आदि हुँदैनन्। त्यहाँ हुन्छन् नै पूज्य। कलियुगमा छन् पुजारी। तिमी अहिले संगमयुगमा पूज्य देवता बनिरहेका छौ। अहिले तिमी ब्राह्मण बनेका छौ। यस समय तिम्रो यो अन्तिम पुरुषार्थी शरीर अति मूल्यवान् छ। यसमा तिमीले धेरै कमाई गर्छौ। बेहदका बाबासँग तिमीले खानपिन गर्छौ। पुकार्छन् पनि उहाँलाई नै। यस्तो भन्दैनन्, कृष्णसँग खाऊँ। बाबालाई याद गर्छन्– तिमी माता-पिता.... बालक त पितासँग खेलिरहन्छन्। कृष्णका हामी सबै बालक हौं, यस्तो भन्दैनन्। सबै आत्माहरू परमपिता परमात्माका सन्तान हुन्। आत्माले शरीरद्वारा भन्छ– हजुर आउनु भयो भने हामी हजुरको साथमा खेल्छौं, खान्छौं, सबथोक गर्छौं। तिमीले भन्छौ नै बापदादा। त्यसैले घर जस्तै भयो। बापदादा र बच्चाहरू। यी ब्रह्मा हुन् बेहदको रचयिता। बाबा यिनमा प्रवेश गरेर यिनलाई एडप्ट गर्नुहुन्छ। यिनलाई भन्नुहुन्छ तिमी मेरा हौ। यो हो मुख वंशावली। जस्तै स्त्रीलाई पनि एडप्ट गर्छन् नि। त्यो पनि मुखवंशावली नै भयो। भन्छन् तिमी मेरी हौ। फेरि उनीबाट कोख वंशावली बच्चाहरू पैदा हुन्छन्। यो चलन कहाँबाट चल्यो? बाबा भन्नुहुन्छ– मैले यिनलाई एडप्ट गरेँ नि। यिनीद्वारा तिमीलाई एडप्ट गर्छु। तिमी मेरा बच्चाहरू हौ। तर यी हुन् पुरुष (मेल)। तिमीहरू सबैलाई सम्हाल्नको लागि फेरि सरस्वतीलाई पनि एडप्ट गरेँ। उनलाई माताको टाइटिल मिल्यो। सरस्वती नदी। यी नदी माता भइन् नि। बाबा सागर हुनुहुन्छ। यी पनि सागरबाट निस्किएकी हुन्। ब्रह्मपुत्रा नदी र सागरको धेरै ठूलो मेला लाग्छ। यस्तो मेला अन्त कहीं लाग्दैन। त्यो हो नदीहरूको मेला। यो हो आत्माहरू र परमात्माको मेला। त्यो पनि जब शरीरमा आउनु हुन्छ तब मेला लाग्छ। बाबा भन्नुहुन्छ– म हुसेन हुँ। म यिनमा कल्प-कल्प प्रवेश गर्छु। यो ड्रामामा निश्चित छ। तिम्रो बुद्धिमा सारा सृष्टिको चक्र छ, यसको अवधि ५ हजार वर्ष छ। यस बेहदको फिल्मबाट फेरि हदको फिल्म बनाउँछन्। जो पास्ट भयो सो प्रिजेन्ट हुन्छ। प्रिजेन्ट फेरि फ्युचर बन्छ, जसलाई फेरि पास्ट भनिने छ। पास्ट हुन कति समय लाग्यो? नयाँ दुनियाँमा आएको कति समय बित्यो? ५ हजार वर्ष। तिमी अहिले हरेक स्वदर्शन चक्रधारी हौ। तिमीले सम्झाउँछौ– हामी पहिला ब्राह्मण थियौं फेरि देवता बन्यौ। तिमी बच्चाहरूलाई अहिले बाबाद्वारा शान्तिधाम सुखधामको वर्सा मिल्छ। बाबा आएर तीन धर्म एकैचोटि स्थापन गर्नुहुन्छ। बाँकी सबैको विनाश गराइदिनुहुन्छ। तिमीलाई फर्काएर लैजाने सद्गुरु बाबा मिलेको छ। बोलाउँछन् पनि हामीलाई सद्गतिमा लैजानुहोस्। शरीरलाई समाप्त गराउनुहोस्। यस्तो युक्ति बताउनुहोस् ताकि हामी शरीर छोडेर शान्तिधाम जान सकौं। गुरुको पासमा पनि मनुष्य त्यसैले जान्छन्। तर ती गुरुले त शरीरबाट छुटाएर साथमा लैजान सक्दैनन्। पतित पावन हुनुहुन्छ नै एक बाबा। उहाँ जब आउनु हुन्छ अनि पावन अवश्य बन्नु पर्ने हुन्छ। बाबालाई नै भनिन्छ कालहरूको काल, महाकाल। सबैलाई शरीरबाट छुटाएर साथै लैजानुहुन्छ। उहाँ हुनुहुन्छ सुप्रिम गाइड। सबै आत्माहरूलाई फर्काएर लैजानुहुन्छ। यो छी-छी शरीर हो, यसको बन्धनबाट छुट्न चाहन्छन्। कहीं शरीर छुट्यो भने बन्धन छुट्ने थियो। अहिले तिमीलाई यी सबै आसुरी बन्धनहरूबाट छुटाएर सुखको दैविक सम्बन्धमा लैजानुहुन्छ। तिमीले जानेका छौ– हामी शान्तिधाम हुँदै सुखधाममा आउँछौं। फेरि दु:खधाममा कसरी आउँछौ? यो पनि तिमीले जानेका छौ। बाबा आउनु हुन्छ नै श्यामबाट सुन्दर बनाउन। बाबा भन्नुहुन्छ– म तिम्रो आज्ञाकारी सत्य पिता पनि हुँ। पिता सदैव आज्ञाकारी हुन्छन्। सेवा धेरै गर्छन्। खर्च गरेर पढाएर फेरि सबै धन-दौलत बच्चाहरूलाई दिएर स्वयं गएर साधुहरूको सङ्ग गर्छन्। आफू भन्दा पनि बच्चाहरूलाई उच्च बनाउँछन्। यहाँ बाबाले पनि भन्नुहुन्छ– मैले तिमीलाई डबल मालिक बनाउँछु। तिमी विश्वको पनि मालिक हौ भने ब्रह्माण्डको पनि मालिक बन्छौ। तिम्रो पूजा पनि डबल हुन्छ। आत्माहरूको पनि पूजा हुन्छ। देवता वर्णमा पनि पूजा हुन्छ। मेरो त सिंगल केवल शिवलिंगको रूपको पूजा हुन्छ। म राजा त बन्दिनँ। तिम्रो कति सेवा गर्छु। यस्तो बाबालाई फेरि तिमी बिर्सिन्छौ किन! हे आत्माहरू! आफूलाई आत्मा सम्झेर मलाई याद गर्यौ भने तिम्रो विकर्म विनाश हुन्छ। तिमी कसको पासमा आएका छौ? पहिला बाबा फेरि दादा। अहिले फादर फेरि ग्रेट-ग्रेट ग्रेन्ड फादर आदिदेव एडम किनकि धेरै वंशावली बन्छन् नि। शिवबाबालाई कुनै ग्रेट-ग्रेट ग्रेन्ड फादर कहाँ भनिन्छ र? हर कुरामा तिमीलाई धेरै उच्च बनाउनु हुन्छ। यस्ता बाबा मिल्नुहुन्छ फेरि उहाँलाई तिमीले किन भुल्छौ? भुल्यौ भने पावन कसरी बन्छौ! बाबाले पावन बन्ने युक्ति बताउनु हुन्छ। यस यादबाट नै मैला निस्कन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ– प्यारा बच्चाहरू! देह-अभिमान छोडेर आत्म-अभिमानी बन, पवित्र पनि बन। काम महाशत्रु हो। यो एक जन्म मेरो लागि पवित्र बन। लौकिक बाबाले पनि भन्छन् नि– कुनै फोहोरी काम नगर। मेरो दाह्रीको लाज राख। पारलौकिक बाबाले पनि भन्नुहुन्छ– म पावन बनाउन आएको हुँ, अब कालो मुख नपार। नत्र इज्जत गुमाउँछौ। सबै ब्राह्मणहरूको र बाबाको पनि इज्जत गुमाउँछौ। लेख्छन्– बाबा हामी गिर्यौं। कालो मुख गरिदिएँ। बाबा भन्नुहुन्छ– म तिमीलाई सुन्दर बनाउन आएको छु, तिमीले फेरि कालो मुख गर्छौ। तिमीले त सदा सुन्दर बन्ने पुरुषार्थ गर्नु छ। अच्छा!
१) यो अन्तिम पुरुषार्थी शरीर धेरै मूल्यवान् छ, यस शरीरद्वारा धेरै कमाई गर्नु छ। बेहदका बाबाको साथमा खाँदा-पिउँदा.... सर्व सम्बन्धहरूको अनुभूति गर्नु छ।
२) कुनै पनि यस्तो कर्म गर्नु हुँदैन जसबाट ब्राह्मण परिवारको वा बाबाको इज्जत जाओस्। आत्म-अभिमानी बनेर पूरा पवित्र बन्नु छ। यादबाट पुराना मैला निकाल्नु छ।
कलियुगी दुनियाँको दु:ख अशान्तिको दृश्यलाई देख्दै सदा साक्षी वा बेहदको वैरागी भव
यस कलियुगी दुनियाँमा जेसुकै होस् तर तिम्रो कला सदा वृद्धि भइरहोस्। दुनियाँको लागि हाहाकार छ तिम्रो लागि जयजयकार छ। तिमी कुनै पनि परिस्थितिसँग आत्तिदैनौ किनकि तिमी पहिलेबाटै तयार छौ। साक्षी भएर हर प्रकारको खेललाई देखिरहेका छौ। कोही रून्छ, कराउँछ, साक्षी भएर हेर्दा आनन्द आउँछ। जसले कलियुगी दुनियाँको दु:ख अशान्तिको दृश्यलाई साक्षी भएर देख्छन् उनीहरू सहजै बेहदका वैरागी बन्छन्।
कुनै पनि धरती तयार गर्नु छ भने वाणीको साथै वृत्तिद्वारा सेवा गर।